နိုင်ငံခြားက ပရိသတ်နှစ်ယောက်ဆီကနေ iPhone လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ယုန်လေး - Cele Gabar
နိုင်ငံခြားက ပရိသတ်နှစ်ယောက်ဆီကနေ iPhone လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့ ယုန်လေး
By RainowPosted on July 28, 2020 July 28, 2020
ယုန်လေးကတော့ ဂီတဝါသနာရှင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကို လက်တွဲခေါ်ယူနေသလို ချို့တဲ့ပြီးအကူညီလိုနေတဲ့သူတွေကိုလည်း လက်လှမ်းမှီသလောက် ကူညီပေးနေသူပါ။ သူ့ရဲ့လေးစားဖွယ်ရာစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ ယုန်လေးဆိုပြီး ပရိသတ်တွေက လေးစားချစ်ခင်လာကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း သူ့ကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဆီကနေ မထင်မှတ်ထားဘဲ iPhone တစ်လုံးလက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းကို မျှဝေလာပါတယ်။ iPhone လက်ဆောင်လေးကိုတော့ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော် ဟက်ကက်ကိုယ်တိုင် လာပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီလက်ဆောင်လေးရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ ” ကို ဟက်ကက် ဖုန်းဆက်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁)လ ကတည်းက …. ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ နိုင်ငံခြားက .ကိုဟက်ကက် ညီ (၂) ယောက် လက်ဆောင်ပို့လိုက်လို့ဆိုတော့ . ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါပေါ့ …. အကျီၤတို့ ဘာတို့ပဲ ထင်တာ . ဒီနေ့ မှ လာပေးတော့မှ I Ph …. ကျွန်တော် မကိုင်တက်တာနဲ့တော့ တွေ့ပြီ” ဆိုပြီး ဝမ်းသာစွာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ယုန်လေးကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပိုက်ဆံရှိရင်တောင် iPhone ကိုင်လေ့မရှိပေမယ့် အခုလိုအချိန်မှာတော့ ချစ်ခင်ပြီး လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေကြောင့် မကိုင်တတ် ကိုင်တတ်နဲ့ ကိုင်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ပျော်ရွှင်စွာ မျှဝေခဲ့တာပါ။ ပရဟိတတွေလုပ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေဆီက လေးစားချစ်ခင်မှုနဲ့ အသိမှတ်ပြုလက်ဆောင်တွေရလာတဲ့ ယုန်လေးကတော့ ပျော်နေမှာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ…
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, ယုန်လေး
Previous post ပထမဆုံးသီချင်းရဲ့ Teaser ဗီဒီယိုလေးနဲ့တင် မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အောင်မြင်နေတဲ့ အက်စတာ
Next post စိတ်ကူးထဲမှာ နေတိုးနဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့သမီးလေး ရွှန်းရွှန်း